စကားအရမ်းမများတဲ့ လူမျိုး (သို့မဟုတ်) ယောက်ျားလေးလို စကားများတဲ့ လူမျိုး။ တချို့ယောက်ျားလေးတွေက မိန်းကလေးလိုစကားများတယ်။ အဲ့ဒါမျိုး မကြိုက်ပါ။ အတင်းပြောတဲ့ယောက်ျားလေးများ၊ မဟုတ်တာကို ဟုတ်သလိုလို ရွှီးတဲ့ယောက်ျားလေးများ၊ ဘာမဟုတ်တာကို ချဲ့ကားတတ်သော ယောက်ျားလေးများ လုံးဝဆွဲဆောင်မှု မရှိပါ (ကန်ဒီ့အမြင်)။ အပြောထက် လက်တွေ့ပြတတ်တဲ့ ယောက်ျားလေးတွေက ဆွဲဆောင်မှုပိုရှိတယ်။ ဟာသဥာဏ်ရွှင်တဲ့ ယောက်ျားလေးတွေလည်း တမျိုးဆွဲဆောင်မှုရှိတာပဲ။ အချိန်တိကျတဲ့ ယောက်ျားလေးများ။ ကန်ဒီမကြိုက်ဆုံးအကျင့်က ဘာလဲသိလား? အချိန်မလေးစားတာပေါ့။ ချိန်းထားလို့ ၁၀မိနစ် ၁၅မိနစ်နောက်ကျတာ လက်ခံတယ်။ အဲ့ထက်ပိုရင် ကန်ဒီစိတ်မရှည်တတ်ဘူး။ ကန်ဒီ့အချိန်တွေ သူတို့ဝါးစားနေသလို ခံစားရတယ်။ ၁နာရီလောက်နောက်ကျတာမျိုး ကြုံဖူးတယ်။ အဲ့ဒါမျိုး ကန်ဒီ့ကို တခါပဲလုပ်လို့ရမယ် ဟွင်းဟွင်း။ နောက်တခါ အဲ့လိုလူမျိုးနဲ့ ချိန်းရင် ကန်ဒီအမြဲ နောက်ကျမှ သွားတော့တယ်။ အဲ.. ဒါပေမယ့် အချိန်လေးစားတဲ့လူမျိုးတွေ့ရင် ကန်ဒီအရမ်းသဘောကျတတ်တယ်။ ပြုံးခဲတဲ့ ယောက်ျားလေးများ။ တချို့ယောက်ျားလေးတွေက ရုပ်တည်ကြီးတွေနဲ့ ပြုံးခဲတယ်။ အဲလိုလူမျိုးကို ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်ပဲ ပြောရမလား.. မရှိဘူးပဲ ပြောရမလား မသိဘူး။ အဲ့လိုလူမျိုးတွေ ပြုံးပြီး ရီရင် ကန်ဒီအရမ်းသဘောကျတယ်။ အဟိ.. တခါတလေကျတော့လည်း လူ့သဘောသဘာဝက နည်းနည်းဆန်းတယ်နော်။ ဒါအကုန်ပဲ ထင်တယ်။ စဉ်းစားလို့မရတော့ဘူး။ ဖတ်နေတဲ့သူတွေရဲ့အမြင်မှာ ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်ထင်တဲ့ မိန်းကလေး (သို့) ယောက်ျားလေးရဲ့ပုံစံတွေကို ပြောပြချင်ရင် ပြောပြခဲ့လို့ရတယ် သိလား။ ကန်ဒီက စိတ်မဆိုးတတ်ဘူး :D :D
ကြည့်သွားတယ်ဖတ်သွားတယ် ညီမရေအမလည်းအချိန်မလေးစားတာမကြိုက်ဘူးဘယ်သူမှလည်းမစောင့်ဘူး လာချင်လာမလာချင်နေ :Pအပျိုကြီးကွ ဘုကျကျပဲ :D
ညီမလေးရေ မကြီးလွမ်း စာလည်းဖတ် ရုပ်သံလည်း ကြည့်ခဲ့တယ်။ကျေးဇူးပါကွယ်။အော်... ကန်ဒီဘလော့မှာတော့ (လမင်း-ချစ်စံအိမ်)က အပျိုကြီးဖြစ်ကြောင်း ကြော်ငြာလာဝင်သွား တာကိုး။ သူပြောတော့ ခေါင်းရှုပ်လို့ ဆိုပြီး. အဟင့်ခင်မင်တဲ့မကြီးလွမ်း
ငါ့ညီမကတော့ ပွဲတွေတက်..သူတယောက်တည်းစား...ဗီဒိုတွေရိုက်နဲ့...ဒို့များကတော့ ...ပွဲကြည့်ပိတ်သတ်ဘဲလုပ်နေရတယ်.. ဟင့်း(
နာ..တော့...မပါဘူး...အသေအချာပဲ..ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ ယောကျာ်းများထဲမှာ..တော်တော်များများက လွဲနေတယ်....ပီား..
အရပ်ရှည်ရှည် အသားညိုညို ဘော်ဒီနည်းနည်းရှိတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မျိုး << Yes!ပုဆိုးဝတ်ထားရင် အရမ်းကြည့်ကောင်းတယ် ,,yes!Happy New Year Candy :)
သူက အဘိဓာန်တောင်ရေးတော့မယ်ပုံမှာရှိနေပြီ ဘာတဲ့ယောကျာင်္းဋ္ဋီကာဆိုပြီးလေး)))ဘယ်ပုံစံကိုကြိုက်တယ်လို့ရွေးလိုက်ရင် ကိုယ်ယူထားတဲ့ယောကျာင်္းနဲ့လွဲများနေမလားလို့ မပြောတော့ပါဘူးအေး))))ချစ်တဲ့အမဂျီးးဂျာရစ်
အပေါ်က ကွန်မက်စာလုံးပေါင်းတွေမှားလို့ပြန်ဖျက်လိုက်တာနော်ကန်ဒီလေးရေးတာတွေအားလုံး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ပုံတွေလဲ ရိုက်ထားတာကပညာပါတော့ကြည့်ရတာလဲအဆင်ပြေတယ် မရိုးပါဘူး
အိမ်လည်လာသွားတယ်ဗျို့..... ဟိုဗီစီဒီ သီချင်းတောင် သတိရသေးတယ်.. ဆုံသင်းပါရ်ဆိုထားတာ၊ တို့ ချစ်မြတ်နိုးသူ... ဖြူစင်ရိုးသား စိတ်ထားမြင့်မြတ်သူ၊ ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသူ၊ ပြသနာ အသေးအမွှားလေးကို မီးထွန်းအပစ်မရှာဘူး.... ဆိုပြီးတော့ နတ်သား စိတ်ညစ်ပြီး နတ်ပြည်ပြန်သွားတာလေ... :P